अमेरीकामा एकाएक कसरी सुरु भयो चर्च भित्र योग कक्षा? (भिडियो हेर्नुहोस्) – List Khabar
Home / समाचार / अमेरीकामा एकाएक कसरी सुरु भयो चर्च भित्र योग कक्षा? (भिडियो हेर्नुहोस्)
अमेरीकामा एकाएक कसरी सुरु भयो चर्च भित्र योग कक्षा? (भिडियो हेर्नुहोस्)
admin August 15, 2021 समाचार Leaveacomment 34 Views
चर्च भन्ने वित्तिकै इसाई समुदायले प्रार्थना गर्न स्थल भन्ने बुझिन्छ । हुन त योगको कुनै धर्म हुँदैन तर योग भन्ने बित्तिकै हिन्दू र बौद्ध धर्मसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर हालै चर्चमा योग गरिरहेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा रहेको एक चर्चमा एक महिला योग गरिरहेको भिडियो देख्न सकिन्छ । यसको समाचार सबै अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले प्रशारण गरेका छन् । त्यहाँको अप्पर वेस्ट साइडको एक चर्चमा एक महिलाले योगासनहरू गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
ती महिलाले भिडियो क्यामराका अगाडि योग गरेकी हुन् । चर्चमा महिनाको दुईपटक भर्चुअल योग सत्रहरू आयोजन गरिने गरेका छन् । यी सत्रहरुबाट अमेरीकीहरुले योग गर्ने तरीका सिक्नेछन् । ती महिलाको नाम मिचेल्सन ब्राटलेट भएको बताइएको छ ।
Previous सपनामा सुन देख्नु कस्तो अवस्थामा शुभ, कस्तोमा अशुभ ? हेर्नुहोस् सुनले गर्ने संकेत !
Next ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?